Icompact Cryogenic Tank-Welding kunye nokusika-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>izicelo>Welding & Ukusika
Inkqubo yokuhanjiswa kwegesi esembindini
Ukucoca okuphezulu okuphezulu
Sika ngokuzenzekelayo inkqubo yokufaka itanki leloli
Umgangatho we-ASME kunye nengxelo yovavanyo eneenkcukacha
SinoCleansky ICompact Cryogenic Tank --- uthotho lwe-SCCT liqonga lokugcina igesi, ngokukodwa eyilelwe ababambeleyo babasebenzisi besilinda ekusikeni, ukuwelda, ilebhu ye-cryogenic, isibhedlele kunye nokunye. I-SCCT yethu netanki lelori ibaluleke kakhulu.
I-SinoCleansky Compact Cryogenic Tank --- Inkqubo yokugcina uthotho lwe-SCCT ivumela abasasazi begesi abapakishwe kunye nabasebenzisi ukuba bonwabele izibonelelo zokuhanjiswa kwegesi kwindawo. Ukuthintela inkunkuma yexesha, ilahleko engamanzi, iindleko zomsebenzi xa ufaka iisilinda. Sebenzisa uthotho lwe-SCCT, akukho silinda sithatha indawo, akukho lahleko lulwelo, akukho monakalo kwimisebenzi.
I-ASME / GB
I-LOX / LIN / LAr ​​/ LCO2 / LNG
Inkqubo yokuhanjiswa kwegesi esembindini --- edityaniswe netanki yokugcina encinci, i-PBC, umphunga kunye nemibhobho;
Ukucoca okuphezulu okuphezulu okungafaniyo kunye nolwakhiwo olwenziwe kakuhle-- i-ZERO nokuba yiBARELY ZERO ilahleko engamanzi;
Ukuseta indawo yokugcina ngokutsha kwindawo yogcino lwangaphakathi, kunye nokugcina amandla exesha elide;
Requirements Iimfuno eziphantsi kwimeko yokusebenza kwendawo;
⑤ Ukuphakamisa i-lug kunye ne-forklift yokuxhasa inkxaso esisiseko --- Kulula ukutshintsha indawo yokusebenza (kuthintele ukuhamba xa ulwelo);
Distance Umgama wokuhambisa omfutshane, kunye noxinzelelo oluzinzileyo lokuhambisa igesi, olunokuseta ngokuthe ngqo kufutshane nezixhobo, abathengi banokusebenzisa kuxhomekeke kwimeko eyiyo yolawulo loxinzelelo lwegesi;
Umbhobho wokudibanisa umbhobho wegesi ngokudibana kwamazwe aphesheya, ekulungeleyo ukudityaniswa nokudityaniswa, kwaye ekunokubonelela ngokuthe ngqo ngegesi emva kokudibanisa
Op Ukwamkela i-gauge yolwelo lwenqanaba lolwelo, elichaneke ngakumbi ukubonisa idatha;
Cut Yinqumle ngokuzenzekelayo inkqubo yokufaka itanki yeroli;
⑩ Ukufaka isicelo ukugcina iLOX,LN2,I-LAr,I-LCO2,LNG njl.
ICompact Cryogenic Tank iya kusongelwa ngeplastiki eyomeleleyo kwaye ipakishwe kwisikhongozeli kwaye ilungiswe ngeentambo. Okanye ngesiqulatho esingaphezulu esivulekileyo.
ICompact Cryogenic Tank ihanjiswa nengxelo yovavanyo lwefektri eneenkcukacha, kunye nengxelo yovavanyo yomntu wesithathu.
Kuthiwani ngohlobo lophawu lweevaluva kunye neegeji?
Sibonelela ngezivalo zohlobo oludumileyo lwaseTshayina kunye nezivalo zombala zamanye amazwe ezisekwe kwisicelo sabathengi, ezinje ngeHerose, Rego, WIKA, njl.
Ngaba ikhona igesi ngaphandle?
Ewe, igesi ngaphandle iyafumaneka xa umthengi ecela.
Kuthekani malunga isiqinisekiso?
Le mveliso kunye namalungu ngokomhla wokuthunyelwa ungonwabela inkonzo yewaranti yeenyanga ezili-12.